Kooxaha Villarreal iyo Real Madrid oo barbadhac ku kala baxay… +SAWIRRO - Hargeele - Wararka Somali State
(Spain) 21 Nof 2020. Kooxaha Villarreal iyo Real Madrid ayaa ku kala baxay barbadhac 1-1 ah kulan qeyb ka ahaa horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Daqiiqadii 2-aad ee bilawgii ciyaarta Real Madrid ayaa hoggaanka u qabatay dheesha waxaana 0-1 ka dhigay Mariano Diaz, kaddib markii uu goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Daniel Carvajal.
Daqiiqadii 76-aad kooxda Villarreal ayaa loo dhigay rigoore waxaana gool u badelay Gerard Moreno, ciyaarta ayaana sidaas ku boqotay barbardhac 1-1 ah.
Laakiin ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxay ku soo dhamaatay barbardhac 1-1 ah ay ku kala baxeen labada kooxood Villarreal iyo Real Madrid.
Chelsea oo u gudubtay wareega siddeed dhamaadka ee koobka FA Cup kaddib markii ay garaacday kooxda Liverpool… +SAWIRRO